उपनिर्वाचनपछि समाजवादी पार्टीले लिदैँछ यस्ताे ठूलाे निर्णय -
१ मंसिर २०७६, आईतवार २०:२० 166 पटक हेरिएको
काठमाडौं – उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकार छाड्ने तयारी गरिरहेकाे छ। उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टी नेपाल उपनिर्वाचनसम्म मात्रै सरकारमा बस्ने गरी सरकार छाेड्ने याेजना बनाइरहेकाे छ।
पार्टीको बैठकमा सरकार छाड्न दबाब बढेपछि शीर्ष नेताबीच उपनिर्वाचनसम्म मात्रै सरकारमा बस्ने आन्तरिक सहमति भएको स्राेतते बताएकाे छ।
बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको संघीय परिषद् र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताले पार्टी सरकार छाडेर संघर्षमा जानुपर्ने दिएका थिए । तर, अध्यक्ष यादवले भने त्यसलाई प्रतिवादसमेत गरे पनि अन्ततः बहुमत सदस्यले सरकार छाड्नुपर्ने धारणा राखे पछि तीन चरणको प्रक्रिया पूरा गरेर समाजवादीले सरकार छाड्न लागेको हो ।
शनिबार साँझ अबेर सम्पन्न बैठकले सरकारमा बस्ने कि नबस्ने अधिकार पदाधिकारीलाई दिएको छ । बैठकमा सहभागी अधिकांशले सरकार छाडेर पहिचानवादी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग एकीकरण गरेर आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासनका लागि संघर्ष गर्ने, ११ प्रदेशका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेलगायत मुद्दामा जोड गरेका छन् ।
सरकार र समाजवादी पार्टीबीच भएको सहमतीको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधन र दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, एक वर्ष बित्दासमेत त्यो सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल शुरु भएको छैन ।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री छन् । भने मोहम्मद इस्तियाक राईले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै, डा. सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको रुपमा सरकारमा छन् । विगतको सहमती अनुसार संविधान संशोधनमा भएको ढिलाईप्रति समाजवादी पार्टीमा असन्तुष्टी बढ्दै गएको हो ।